အိမ် ရောင်းရန် အတွင်း Yangon
ဓမ္မ ‌စေ တီလမ်းမ‌ပေါ် ရှိလုံးချင်း‌ရောင်းမည်‌
ပိုင်ဆိုင်မှု အိုင်ဒီ: 2001217
၇၉ ဓမ္မ ‌စေတီလမ်း၊ စမ်း‌ချောင်း။ Mistine cosmetic ‌ဘေး။ ၂၀"×၆၆" 3BN, နှစ်‌ ၆၀ ဂရံ။ မျက်‌ နှစ်‌စာ နှစ်‌ဖက်‌ ပွင့်‌၊ ‌ရှေ့ ‌နောက်‌ လမ်း ရှိ။ တစ်‌ဦးတည်းပိုင်‌။ အရှုပ်‌အရှင်း ကင်း။ အထပ်‌ မြင့်‌ ‌ဆောက်‌ နိုင်‌။ အနည်းဆုံး ၈၊ ၉ ထ‌ဆောက်‌ နိုင်‌။ offices နှင့်‌ restaurants များအတွက်‌ ‌နေရာ ‌ကောင်း။ City Mart၊ shopping malls၊ Hotels၊ Banks၊ ပန်းခြံ နှင့်‌ ‌စား‌သောက်‌ဆိုင်‌များ နဲ့ အလွန်‌နီး တဲ့‌နေရာ‌ကောင်း ဖြစ်‌သည်‌။ အ‌သေး သိရှိလိုလျှင်‌ ‌မေးမြန်းနိုင်‌ သည်‌။၁၇,၀၀၀ သိန်း (ညှိ နှိုင်း)။
Details on Owner
Listing provided by Owner, . Owner has2other listings.
ဤပရောဂျက်ကို Owner The information contained in this listing formsaproperty advertisement of which dotproperty.com.mm has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty.com.mm cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.